लिनोभोले सार्वजनिक गर्यो मोटो जी ६,मोटो जी ६ प्लस तथा मोटो जी ६ प्लस गरि तीनवटा स्मार्टफोनहरु
मंगलबार, ८ माघ, २०७५
सोमबार, १० बैशाख, २०७५
लिनोभोको अधिकार भएको मोटोरोलाका तीनवटा स्मार्टफोनहरु मोटो जी ६,मोटो जी ६ प्लस तथा मोटो जी ६ प्लस आधिकारिक रुपमा लन्च भएको छ । तीनवटै फोनहरु मध्येमा सबैभन्दा पावरफुल मोटो जी ६ प्लस हो । अन्य दुइ फोनहरुको तुलनामा यो ह्यान्ड सेट ठुलो डिस्प्ले,तेज प्रोसेसर र् ज्यादा र्यामको साथमा आएको छ । तल हेरौँ यी तीनवटै फोनका फिचरहरु:
Moto G6 Plus:
मोटो जी ६ प्लसमा ५.९३ इन्चको डिस्प्ले छ र यसमा १८:९ को एस्पेक्ट रेसियो छ । यसको स्क्रिनमा फुल एचडी प्लस रेजोलुसन छ । एन्ड्रोइड ८.० ओरियोमा चल्ने यो ह्यान्ड सेटमा स्नाप ड्रागन ६३० प्रोसेसरले काम गर्छ । साथै यसमा ४ जीबी र्याम र ६४ जीबी रोम छ र यसलाई १२८ जीबी सम्म बढाउँन सकिन्छ ।
फोनमा क्यामेराको कुरा गर्दा रियरमा १२+५ एमपीको डुअल क्यामेरा सेटअप दिएको छ भने फ्रन्टमा ८ मेगपिक्सेल छ । मोटो जी6 प्लसमा ब्याट्री क्षमता ३२०० एमएएच छ र यसले टर्बो पावर टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दछ । १५ मिनट चार्ज गरेको ब्याट्रीले ७ घण्टा सम्म ब्याक अप दिने कम्पनिले दाबि गरेको छ ।
मोटो जी ६ को कुरा गर्दा यसमा ५.७ इन्चको डिस्प्ले छ,यसमा फुलएचडी प्लस रेजोलुसन र् १८:९ एस्पेक्ट रेसियो छ । ह्यान्ड सेटमा स्नाप ड्रागन ४५० प्रोसेसर छ। ३ जीबी र्याम र ३२ जीबी इन्टरनल मेमोरी छ,जसलाई १२८ जीबी सम्म बढाउन सकिन्छ । यो फोन पनि अन्य फोनहरु झैँ एन्ड्रोइड ८.० ओरियो अपरेटिङ सिस्टममा चल्छ ।
मोटो जी ६ मा १२+५ एमपीको डुअल रियर क्यामेरा छ,साथमा डुअल टोन,डुअल लेन्स फ्ल्यास आदि फिचर्स समेत समावेश छ । मोटोरोलाको यो ह्यान्डसेटमा पनि ३००० एमएएचको पावरफुल ब्याट्री दिइएको छ । यसले पनि टर्बोचार्ज सपोर्ट गर्छ ।
Moto G6 Play :
लिनोभोले सार्वजनिक गरेको अर्को फोन मोटो जी ६ प्ले हो । यसमा १८:९ एसपेक्ट रेसियो छ र् यसको डिस्प्लेमा एचडी प्लस रेजोलुशन छ । यो फोन स्टक एन्ड्रोइड ८.० मा रन गर्छ । यसमा डुअल सिमको सुबिधा छ । यो ह्यान्डसेटमा स्नाप ड्रागन ४३० प्रोसेसरको प्रयोग भएको छ,जसको क्लक स्पिड १.४ जीएचजेड छ ।
प्रयोगकर्ताहरुले यसमा ३ जीबी र्याम तथा ३२ जीबी इन्टरनल स्टोरेज प्राप्त गर्छन । उक्त स्टोरेजलाई १२८ जीबी सम्म बढाउँन सकिन्छ । मोटो जी ६ प्लेमा १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा छ र् सेल्फी प्रेमीहरुका लागि भने ८ मेगपिक्सेलको क्यामेरा छ । मोटो जी6 प्लेमा ४००० एमएएचको पावरफुल ब्याट्री रहेको छ । कनेक्टिभिटीको लागि फोनमा ४ जी एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ, हेडफोन ज्याक आदि रहेको छ ।
दुई स्मार्टफोन Moto G6 र Moto G6 Plus को फ्रन्टमा डिस्प्लेको तल फिंगरप्रिंट सेंसर दिइएको छ । तर मोटो जी ६ प्ले मा भने फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रियरमा दिइएको छ ।
लिनोभोले यी स्मार्टफोनहरुको बिक्रि ब्राजिलबाट शुरु गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्को महिनाबाट बिक्रि शुरु हुने कम्पनिले बताएको छ । यी फोनहरुको मूल्यको बारेमा कुरा गर्दा कम्पनिले मोटो जी ६ प्लेको मूल्य १९९ युरो ,मोटो जी ६ प्लस को मूल्य २९९ युरो र् मोटो जी ६ को भने २४९ युरो तोकेको छ ।
गोप्रो हिरो ७ का ३ मोडलका क्यामेरा नेपाली बजारमा
भीभोले नेपालमा वाई सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरु लन्च गर्ने, वाई ९१ आई, वाई ९१ र वाई ९५ आउँदै
बिहीबार, ३ माघ, २०७५
नेपालमा ओप्पो एफ९ जेड ग्रिन एडिसन सार्वजनिक
आइतबार, २९ पौष, २०७५
ओप्पोले एफ९ जेड ग्रिन सार्वजनिक गर्दै
आइतबार, २२ पौष, २०७५
अनरका स्मार्टफोन नेपालमा
शुक्रबार, २० पौष, २०७५
नेपाली परम्परा झल्काउने नेपाली स्टिकर अब हाम्रो नेपाली किबोडमा
बिहीबार, १९ पौष, २०७५
विभागको निष्कर्ष : स्मार्ट लाइसेन्सको प्रिन्ट गुणस्तरीय छैन
इन्टरनेटकै कारण मेरो किताब ‘बेस्ट सेलर’ भयो : निमेष पौडेल
प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिदैं, इच्छुकले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने
सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पेश हुँदै, नयाँ के के छन् विधेयकमा ?
'टुटल' र 'पठाओ'लाई पहिले झै चल्न दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
गूगल बारे केहि रोचक तथ्य
आगामी आर्थिक वर्षमा डिस होमको आइपिओ
माघ १५ देखि हुने 'सुबिसु क्यान इन्फोटेक'को तयारी तीव्र, ९० प्रतिशत स्टल बुकिङ
ओपो स्मार्टफोनहरुको मूल्य (Price List of Oppo Smartphone)
फागुन ३ गतेदेखि ‘स्टार्टअप वाईटेक क्यान इन्फोटेक २०१९’
जापानी होटलले हटायो आफ्नो रोबट स्टाफहरु
विद्युत प्राधिकरणले गरेको भाडा वृद्धिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विरोध
सूचना प्रविधिको नयाँ विधेयक संसदमा पेश हुँदै, नयाँ के के छन् विधेयकमा ?
७५ हजार कर्मचारीले समायोजनमा जान भरे फारम, सफ्टवेयरबाटै समायोजन र नियुक्ति पत्र
दूरसञ्चारका प्रोजेक्ट नरोकियोस् भन्नेमा केन्द्रित छु : निमित्त अध्यक्ष खनाल
Copyright © 2017. Living with ICT